पानीपुरी वालामाथि महानगरपालिकाका प्रहरीले गरे यस्तो ज्यादतीः महिनाको तीन हजार मागेको खुलासा (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
घटनाबारे अध्ययन गर्ने मेयरको भनाई
प्रकासित मिति : २०७४ श्रावण ३, मंगलवार प्रकासित समय : १०:४१
काठमाडौं । देशको राजधानी काठमाडौं धेरैको लागि अवसर र सम्भावनाले रंगिएको शहर हो, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रदेखि मानिसहरु बैदेशीक रोजगारी, शिक्षा, ब्यापार ब्यावसाय र सानोतिनो काम गरेर जीवन चलाउने सपना बोकेर दिनहुँ भित्रीने गर्दछन । तर काठमाडौंको वास्तविकता भने आम मानिसले सोचे भन्दा बिल्कुल फरक छ, यहाँ सामान्य मानिसलाई बाँच्न निकै मुस्कील बन्दै गएको छ ।
मुलुकको तराई क्षेत्रबाट काठमाडौं आएका मानिसहरु आफ्नै लगानीमा सडक छेउछाउ वा कुनै खाँली क्षेत्रमा सानोतिनो काम, व्यावसाय गरी परिवारको लालनपालन गरिरहेका भेटीन्छन, तर उनीहरुको पेटमाथि सरकारी निकायहरुले बेलाबेलामा लात हान्ने गरेको पिडा उनीहरुसँग बल्झि रहेको छ ।
काठमाडौंको धुम्बाराही स्थित शंख पार्क गेटको एउ छेउमा लामोसमयदेखि ठेलागाडामा पानीपुरी (गोलकप्पा) र चटपटेको ब्यापार गर्दै आएका सुनसरी जिल्लाका राजीव कुमारमाथि सोमबार (हिजो) महानगरपालिकाका प्रहरीले कार्वाही गर्न खोजेपछि करिब २० मिनेटसम्म दुई पक्षबीच घम्साघम्सी नै भयो ।
सुनसरीबाट परिवारको लालनपालनका लागि काठमाडौं हानिएका राजिव, बिगत लामो समयदेखि यहाँ काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएको छन । महानगरपालिकाका प्रहरीहरुले सिभिल ड्रसमा आएर महिनाको तीन हजारसम्म नबुझाएमा त्यहाँ पसल गर्न नदिने भन्दै आफुलाई दुख दिएको राजिवले हरपल नेपालसँग बताएका छन ।
राजिवले दुखि हुदैँ भने–‘पैसा नदिएका कारण उनीहरुले म माथि धरपकड गरें, मेरो सामान फाली दिए, हामीलाई यहाँ कस्ले न्याय दिने ? के हामीले बाँच्न पनि न पाउँने हो ?’
यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग हरपल नेपालले कुराकानी गर्दा उनले सम्बन्धीत कर्मचारीहरुसँग बुझेर आवश्यक कार्वाही गर्ने बताए । उनले तत्काल ति कर्मचारीहरुसँग घटनाको बारेमा सोधिने र पैसा खाएको वा मागेको खुल्न आएमा कार्वाही हुने विश्वाश ब्यक्त गरें ।
त्यसो त महानगरपालिकाका प्रहरी र साना, फुटपाथका ब्यापारीहरुबीच पहिलेदेखि नै लुकामारी र यस्तो खालको दोहोरी चल्दै आएको छ । काठमाडौंका गौशाला, कोटेश्वर, रत्नपार्क, वानेश्वर, कलंकी, नयाँ बसपार्क, चालहेल, स्वयम्भु लगायत विभिन्न स्थाहरुमा सानो लगानीका ब्यवसायीहरुले फटपाथमा विभिन्न काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउँदै आएपनि बेलाबेला महानगरपालिकाका सिभिल डे«समा आउने प्रहरीद्धारा भने आतंकित हुनु परेको दुखेसो गर्छन ।
राजिवमाथि त्यो ब्यवहार किन र कसरी भयो ?
सुनसरीबाट जीविका चलाउन काठमाडौं पुगेका राजिव, एक सामान्य नागरिक हुन । उनी चटपटे बनाउने काम गर्छन ।
उनका अनुसार महानगरपालिकाका प्रहरीले पार्क अगाडि पसल गरेमा पैसा दिनुपर्ने बताए थिए, तर उनले पैसा नतिरेका कारण हिजो उनीमाथि त्यस्तो ब्यवहार गरिएको हो ।
हरपल नेपाल डटकम घटना स्थिलमा पुग्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाको बा १ ग ११४९ नम्बरको मिनि ट्रक पार्कको अगाडि रोकिएको थियो, त्यहाँ महानगरपालिकाका तीन जना कर्मचारीहरुले राजिवलाई तानातान गरिरहेका थिए, जुन भिडियो सामाग्रीमा समेत प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
ती तीन जना मध्ये एक जना सवारी चालक (कुमार तामाङ, सिभिल ड्रेसमा), एक असई (सिभिलमा) र एक सइसाब (ड्रेसमा) भएको स्थानीयले हामीलाई बताए । पार्कको गेटमा अन्य ब्यापारीहरु पनि थिए, तर प्रहरीलेले राजिवमाथि नै किन कार्वाही गर्न खोज्यो ? किन उनीमाथि त्यस्तो ब्यवहार भयो ? त्यो भने खोजिकै विषय बनेको छ ।
प्रहरीले उनीमाथि धरपकड गर्नुका साथै सामानहरु समेत फालेका छन । पछि स्थानीयवासीन्दाहरुले काम गरी खाने मानिसमाथि अत्याचार भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेपछि उनलाई छाडिएको थियो ।
पैसा खाएको विषयमा बोल्न चाहेनन प्रहरी
ती ब्यापारीले मात्र होइन, काठमाडौंका धेरै स्थानका साना ब्यापारीहरु महानगरपालिकाका प्रहरीले सामान बेच्न दिए बापत मासिक रुपमा पैसा असुल्ने गरेको दुखेसो हामीसँग गरेका छन ।
हिजो शंखपार्कमा भएको उक्त घटनामा प्रहरीको अगाडि नै कराउँदै राजिवले भने–‘मैले पैसा नदिएकाले पक्राउ गर्न खोज्दै छ । पैसा माग्छ यो प्रहरी….’ तर उनको उक्त आरोपको विषयमा हामीले प्रतिकृया माग्न खोज्दा प्रहरीका असई र सई दुबै नाजवाफ भए । उनीहरुले केही बोल्न चाहेनन । एक जना पार्क भित्र पसें र धेरै बेरसम्म बाहिर पनि निस्केनन ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी कोटेश्वरका साजन लामाले प्रहरीले चोरको जस्तो तरिकाले आएर सामान्य काम गरीखाने मानिसलाई दुख दिन रोक्नु पर्ने बताउँछन । उनले राज्यले ब्यापारीहरुको लागि निश्चित क्षेत्र तोकेर काम गरी खाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । बिना सूचना र जानकारी सामान फाल्ने र कारवाहीको नाममा त्यस्तो ब्यवहार गर्नु गलत भएको उनको भनाई थियो ।
तर सवारी चालक कुमार तामाङले भने आफुले ब्यापारीबाट पैसा नमागेको प्रतिकृया दिए । उनले आफुले ति ब्यापारीलाई पहिलो पटक देखेको भन्दै पैसा खाएको प्रमाणित भएका जाँगिर नै छाडिदिने तर्क गरें ।
पेट पाल्नका लागि सडक ब्यपार गर्ने सामान्य मानिसको पसिनाको कमाई को कस्ले खान्छन ? त्यो कुन तहसम्म पुग्छ त ? त्यसमा महानगरका उच्चतम कर्मचारीसम्मको संरक्षण हुनेमा अहिले आशंका बढेको छ ।
महानगर र फुटपाथ ब्यापारीको लुकाछिपि कहिलेसम्म ? निकास के ?
विगत लामो समयदेखि महानगरपालिकाका कर्मचारी र सानो लगानीका फुटपाथ ब्यावसायीबीच लुकाछिपि चल्दै आएको छ । प्रहरी हटाउँदै जान्छ, ब्यावसायीहरु लुकिछिपी पसल चलाउँदै जान्छन, यसले पटक पटक यस्तो घटनाहरु दोहोरिएका छन ।
तर पछिल्लो पटक महानगरका प्रहरीले ब्यावसायीहरुबाट पैसा असुल्ने गरेको सम्बन्धी कुराहरु पनि बाहिर आएका छन, त्यो विषयमा महानगरपालिका किन केही बोल्दैन ? यो भने गम्भिर विषय देखिएको छ ।
ब्यवसायीले निश्चित क्षेत्र मागेका छन, महानगरले अझै सबै ठाउँमा त्यसको ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, त्यसैको उपज हो यस्तो घटनाः एक ब्यावसायीले बताए । उनले महानगरका प्रहरीले पैसा माग्ने गरेको सत्य भएको बताएका छन ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै सडक ब्यापार बढ्ने भएकाले महानगरका प्रहरीहरु पैसा उठाउने धन्दामा सक्रिय बन्दै ब्यावसायीलाई दुख दिन सुरु गरेको उनको आरोप छ ।
यस्ता विबादीत विषयमा सम्बन्धीत पक्षले छानबिन गरी दोषिलाई कारवाही गरेर समस्यामको दिर्घकालिन निकास खोज्नु नै उत्तम देखिन्छ ।